I-Easy Slideshow Play ku-Windows | Izindaba zamagajethi
Amaslayidi awethulwanga kuphela kwi-Microsoft PowertPoint kodwa futhi nakwizinombolo eziningi zezinhlelo zokusebenza ezinikezelwe ngqo kulolu hlobo lomsebenzi. Manje lolu hlelo lokusebenza esilukhulumile kungenzeka kakhulu ukuzama ukukhombisa izithombe ezimbalwa ibekwe kwi-hard drive yethu futhi inohlobo oluthile lomphumela noma inguquko, njengoba sikhumbula ukuthi ngayo, singenza izethulo ezinhle kakhulu futhi ezihlukile ngokuya ngobuciko bethu.
Kepha uma singezokwakha isilayidi esisha sobuchwepheshe esinethuluzi elishiwoyo, lapho-ke kufanele sihlole izinsiza zamahhala ezilungele ukusetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi; uma sikhuluma ngeWindows, kukhona okumbalwa amathuluzi okungenzeka ukuthi siwasebenzisa ukukhiqiza kabusha lesi silayidi, Lokho kuyinjongo yalesi sihloko kepha, ukusho amaqhinga ambalwa wokukwazi ukuwabona ngejubane elisheshayo, eliphakathi noma elihamba kancane ngokusho kwesidingo sethu.
1 Umbukiso wesilayidi nge-picasa 3
2 Umbukiso wesilayidi usebenzisa i-Photo Gallery
3 Isibonisi seWindows Photo
Umbukiso wesilayidi nge-picasa 3
Esizokusho kule ndatshana amathuluzi ambalwa ongawasebenzisa ukukhiqiza kabusha amaslayidi, konke ngaphandle kokukhokha lutho ukuthola uhlobo oluthile lwelayisense esemthethweni. Uma sikhuluma nge umhleli wesithombe se-google, ngakho-ke sizophinde sibe nethuba lokwenza kabusha izithombe nezithombe, lokhu kungeyona intshisekelo okwamanje kepha kunalokho, sazi ukuthi ngabe ikhona yini indlela yokushintsha ijubane lezinguquko.
Isithombe esisibeke engxenyeni engenhla sisikhombisa izinto ezimbalwa esizokuthokozela impela uma sizisebenzisa I-Picasa 3 ukudlala isilayidi sezithombe nezithombe; Ngakwesokudla kunemisebenzi emi-2 ebaluleke kakhulu, omunye wayo kunguye esivumela ukuthi sikhethe uhlobo lomphumela ozokhonjiswa phakathi kwalezi zithombe. Ukuqhubeka kancane ngakwesokudla kuyinkomba encane, lapho singakwazi khona chaza isikhathi esifanele isithombe esisodwa okufanele sidlulele kwesinye. Ngokusobala, lokhu kuyindlela engcono kakhulu uma kukhulunywa ngokudlala amasilayidi wesithombe, njengoba isikhathi soguquko senziwe ngezifiso ngokuphelele.
Umbukiso wesilayidi usebenzisa i-Photo Gallery
Ngoba siphakamisa ukuthi kusetshenziswe amathuluzi ambalwa azosetshenziswa ku-Windows, kungenye enye indlela efanelekile yokudlala amaslayidi Igalari Yesithombe seWindows.
Lolu hlelo lokusebenza alutholanga noma yiluphi uhlobo lokuguqulwa kusukela kunguqulo yalo yango-2012, ngakho-ke ukusetshenziswa komsebenzi wayo ngamunye kulula kakhulu futhi kulula ukwenza. Uma siku-Windows 8, kuzofanele siye ku-Start Screen (New User Interface) naku- bhala igama lalesi sicelo, okungukuthi: Igalari yezithombe.
Kumele nje sikhethe ithuluzi emiphumeleni yalo. Noma isikhombimsebenzisi sibonisa iribhoni eliyinkimbinkimbi phezulu, okwamanje sinentshisekelo yokukhetha "ukubuka" kubha yemenyu phezulu. Ngemuva kwalokho, singachofoza isithonjana esingenhla kwesokudla esithi "Isethulo".
Ngezansi kwalolu khetho kuzovela zonke izinguquko ezizosetshenziswa phakathi kwesithombe ngasinye ngemuva kokuthi la maslayidi eqale ukudlala. Singakwazi futhi cindezela ukhiye wokusebenza F12 ukuze ukudlala okunjalo kuqale ngokushesha. Ngeshwa, kuleli thuluzi lomdabu leWindows ayikho indlela yokushintsha ijubane, kepha kuyindlela enhle uma sifuna ukubona izithombe ngokubukeka okuhle kakhulu.
Isibonisi seWindows Photo
Lokhu kungathathwa njengenye yamathuluzi omdabu weWindows, ongayijabulela kusuka kuWindows 7 kuya kuzinguqulo eziphakeme eziphakanyiswe yiMicrosoft. Indlela yokusebenzisa leli thuluzi ngomunye wemisebenzi elula ukuyenza, ngoba kufanele senze kuphela vula umhloli wethu wefayela ukuya kufolda ethile lapho kutholakala khona ezinye izithombe noma izithombe.
Lapho sesitholile kule folda esishiwoyo, kufanele chofoza kabili kunoma yiziphi izithombe kukhona okwamanje. Engxenyeni emaphakathi yebha engezansi kunesithonjana esinesimo sesikrini, okufanele sisikhethe ukuqala umbukiso wama-slide ngokuzenzekelayo.
Yize leli thuluzi lingasiniki ithuba lokuthi ukubeka ijubane phakathi kwalezi zithombe njengoba I-Picasa 3 isisize sayenza, kepha uma singasebenzisa izivinini ezi-3 ezilungiselelwe ngokuzenzakalela kuthuluzi. Ukwenza lokhu, ngenkathi ukudlala kuqhubeka kufanele sikhethe inkinobho yesokudla yegundane lethu bese sikhetha kokukhethwa kukho okungu-3 okukhona lapho, okungukuthi:
Lezi zivinini zimelela cishe imizuzwana emi-3, 5 nengu-11. Ngazo zonke lezi zinsiza esizishilo, awudingi ukuthola noma yiluphi uhlobo lohlelo lokusebenza lomuntu wesithathu ukuze ukwazi ukudlala ama-slides, ngoba lezo eziphakanyisiwe zikhululekile ukusebenzisa ku-Windows.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Idlalwa kanjani Amaslayidi Kancane noma Ngokushesha ku-Windows